Realme Narzo 20 Pro Ongororo: Iyi foni yakanaka ndeyepakati-renji inokurumidza-kubhadharisa bhenji
If Realme's yepakati-renhare mbozha dzinomiririra chimwe chinhu, iri kuunza iwo maratidziro emhando yepamusoro-magumo mafoni kusvika pasi yepakati-chikamu chikamu apo vanhu vazhinji vanogona kuzviwana. Iyo Realme 6 Series kubva gore rapfuura uye yazvino Realme 7 akateedzana akamira seuchapupu hweicho chokwadi. Nekudaro, patakadzidza kuti bhajeti reiyo brand Narzo akateedzana aive neiyo Realme Narzo 20 Pro musiyano zvakare, takanga takavhiringidzika sezvo isu taifara.
Iwe unoona, Realme's Narzo nhepfenyuro inoshanda mushe yakatenderedza iyo Rs 10,000 mucherechedzo, uko mafoni-anotarisana-kuita bhajeti mafoni anoonekera seakasarudzika tarisiro. Zvisinei, iyo Realme Narzo 20 Pro iri kure neNarzo 20 nhepfenyuro, maererano nematanho uye mutengo. Kutanga paRs 15,000, iyo foni iri padyo nenharaunda yeRealme yake 7 akateedzana. Nekudaro, hapana foni muchikamu inopa zvinoitwa neNarzo 20 Pro, inova inopenga 65W inomhanya nekuchaja kumhanya. Izvi zvinoita here izvi zvakanaka zvakakwana kuti zviongorore pamusoro pevamwe vakwikwidzi muchikamu? Verenga pamusoro kuti uwane.
Tarisa: Realme Narzo 20 Pro Kamera Ongororo
Kuputsa dhizaini, pane bhatani remagetsi / zvigunwe zvigunwe kurudyi kwechigadzirwa. Iwo ma rocker rocker uye SIM tray inoenda kuruboshwe. Pazasi pane 3.5mm headphone chiteshi, maikorofoni, USB Type-C chiteshi, uye mutauri grille. Rutivi rwepamusoro runoenda rwakachena. Iko kune yakatwasuka quad-kamera module kumashure uye kumberi, isu tine imwechete punchi gomba kumusoro kuruboshwe.
The Realme Narzo 20 Pro foni inotaridzika zvakanaka asi hachisi chinhu chakavakwa zvakanaka kwazvo. Iyo yepurasitiki kumashure ine inoyevedza pani iyo zvinosuruvarisa, inokwakuka padhuze nemipendero uye nepakati kana iwe ukaidhinda. Iwo mabhatani zvakare tad inodedera. Izvo hazvina kushata asi zvakasiyana nemamwe emidziyo yaRememe muchikamu, iyi haina kunyatso kuvakwa setangi. Izvo hazvina basa kana ukarova pane yakanaka yekudzivirira kesi. Donhedza foni usina kupfeka, zvisinei, uye zvinogona kukonzera kukuvara kwakakomba. Iyo purasitiki furemu padivi asi inonzwa kunge yakasimba. Inotaridzika kunge yakasarudzika yakasarudzika pane diki diki color musiyano watinayo.
Iyo Narzo 20 Pro, kusiyana nehama dzayo dzinotarisira bhajeti, inorongedza iyo FHD + skrini. Iyi 6.5-inch IPS LCD pani. Iko kune ikozvino-standard 20: 9 factor ratio ine 83.4 muzana screen-to-body ratio. Iyo pani yacho pachayo yakanaka yemhando skrini muchikamu uye hairerekere kure kure neizvo zvinopihwa nemakwikwi. Isu tinoona mavara akanaka uye makuru ekuona angles. Nekudaro, iyo yekupenya kwepamusoro nhare yefoni haina kunyatsoita pasi pezuva chairo.
Pa6.5-inches, iyo skrini inonzwa chete saizi chaiyo panguva iyo iyo yakasarudzika yepakati-renji skrini iri kusvika padanho re7-inch. Iko kune Corning Gorilla Kudzivirirwa kwegirazi pano. Nekudaro, iyo skrini inouya nezvinoratidzika senge yakashata yemhando yepamusoro skrini inodzivirira iyo iri magineti yezvikanda uye smudges. Tinogona kungoibvisa uye tinoshandisa iyo skrini sezvazviri kana kuisa mari mukuchengetedzwa kwakakodzera kwegirazi.
The Realme Narzo 20 Pro inouya ne Android 10 ine Realme UI kunze kwebhokisi. Iyo interface haisi yakanyanya kuchena, uye inogona kusakurumidza kukumbira kune vanhu vari kutsvaga chitarisiko-senge chitarisiko. Nekudaro, iyo izere kune brim ine akati wandei maficha maficha, akafanana neatinowana pane mamwe maRealme mafoni muchikamu. Kanda mu90Hz uye maficha uye kutonhora kweReal UI inoita kuti foni ive mhenyu.
Kutaura kwekuita, isu tine MediaTek Helio G95 chipset pano. Ndiwo akanakisa eiyo Helio G akateedzana izvozvi uye akabatanidzwa ne6GB / 8GB RAM yauinayo pano, multitasking imhepo. Iyo Realme Narzo 20 Pro inogona kubata yayo neakawanda maapplication panguva yakanyatsogadzikana. Kana zvasvika pakutamba, iwe unowana kumwe kuita kwakanaka zvakare. Nepo iwo ekumusoro graphic marongero uye furemu-mareti angavhurwa mune mamwe mazita, ramba uchifunga kuti mhedzisiro yacho inokurumidza kupisa kumusoro kwechigadzirwa. Kana iwe ukaronga pamitambo kweinopfuura awa mukutambanudza, isu taizopa toning pasi iwo ma graph zvishoma.
The Realme Narzo 20 Pro haisi foni inoratidzira setup yayo yekamera pamusoro pezvimwe zvinhu. Nekudaro, kune 48-megapixel main Samsung sensor pane foni pano. Mune chaiwo Realme quad-kamera fashoni, iwe une mana sensors pano. Iwo mamwe ari 8-megapixel, macro lens, uye B / W monochrome lens.
Iyo huru sensor pane iyo Realme Narzo 20 Pro inotora mifananidzo yakanaka. Mifananidzo yatakatora yaitaridzika kunge yakajeka uye yainyatso kujeka. Isu takawana mazamu ekuzadza ave zvishoma padivi repamusoro pane dzimwe nguva. Izvi zvakakonzera mafoto ane mavara anobuda zvishoma zvishoma kupfuura zvakajairwa. Kunyangwe isina kukura pakurongeka kwemavara kuzadza kunopa mifananidzo yacho kukwezva kwakasimba.
Kuuya kune yakaderera-mwenje kupfura, isu takawana iyo Realme Narzo 20 Pro inokwanisa kutora yakanakisa mifananidzo. Iyo yekugadzirisa inogadzirisa ruzha zvakanaka nepo iwo mapikicha pachawo anotora akaenzana mwero wechiedza nekuda kweiyo 4-in-1 pixel-binning pane iyo sensor. Manheru ehusiku akazvitsaurira akatipa mhedzisiro zvirinani munzvimbo dzakasviba uye nemwenje wekugadzira. Iko kuita kweiyo 8-megapixel ultrawide sensor zvakare iri pakati. Ipo iyo mifananidzo ichitora hombe furemu, iwe uchaona zvinyoro zvifananidzo zvinowana ruzha nekukurumidza zvakanyanya mukukwana mwenje. Tarisa uone masampula pazasi.
Iyo yakaderera-resolution Macro sensor pane iyo Realme Narzo 20 Pro hazvina kunaka. Inenge nguva dzose inotora mifananidzo isingazungunuke paunopfura neruoko. Kuita kuti igadzikane zvakare hakubatsire nemhando yemufananidzo, iyo inowanzoita ruzha uye isina kunaka nemavara. Iwe uri nani zvirinani kushandisa iyo yekutanga lens pamwe nekucheka kune ako macro mifananidzo.
Mberi kamera mhedzisiro pane iyo Realme Narzo 20 Pro yakanaka kwazvo. Pane imwechete 16-megapixel Sony MX471 sensor pano inoita zvishamiso pano. Ma Selfies anotorwa nekamberi kamera akajeka uye akajeka nemavara. Tsanangudzo yaive yakanaka zvakare, kunyangwe ichitora ma selfies mune yakaderera uye yechiedza mwenje. Portrait modhi yakashanda mushe kunyangwe isina lens yakatsaurirwa, uye kumucheto kwekucherechedza kwainyanya kuve-poindi.
The Narzo 20 pro inoratidzira 4,500mAh bhatiri setup, rakakamurwa mukati maviri 2,250mAh 3C masero. Izvi zvinoita kuti foni inyatsogadzirisa kupisa nepo 65W SuperDart kuchaja kuri kuita. Kubhadharisa kunokurumidza zvakanyanya. Unogona kusiya foni uchibhadharisa iwe uchinge uchikurumidza kudya kwekuseni uye nenguva yaunotora, inogona kunge izere. Kunyangwe kana zvisiri, tarisira zvakakwana muto kuti ugare iwe zuva rese.
Iyo 4,500mAh bhatiri haisi iyo hombe muchikamu. Vazhinji vakwikwidzi vari kupa 5,000 uye 6,000mAh mabhatiri pano. Kana hupenyu hwebhatiri huri chinhu chakakosha kwauri, iwe uchafanirwa kufona nekukurumidza kuchira uye nehuremu hushoma huremu neiyo Realme Narzo 20 Pro, kana bhatiri rakakura remagetsi riine 'zvishoma zvishoma' kuchaja nekukurumidza. Pfungwa iwe, iyo 'inononoka' kubhadharisa nekukurumidza isu tichangobva kutaura inogona kunge iri 30W yekuchaja system futi, senge pane iyo Realme 6i, iyo ichiri kukurumidza kutsetseka muchikamu. Saka isu tinosiya ichi chidiki chako chaunoda kwauri.
Mutongo: Unofanira kutenga iyo Realme Narzo 20 Pro?
Zvakanaka, nefoni zhinji dziri kuvhurwa muchikamu chino nguva pfupi yadarika, uye sarudzo dzakawanda dzinouya kubva kune yega brand, uyu mubvunzo unowedzera kuoma mwedzi yakati wandei. Isu tiri padanho apo runhare runofanirwa kuve rwepamoyo-mukirasi chikamu chimwe chete pachinenge chiri pamusoro pevhareji kune vamwe, kuti chivheneke. Iyo Narzo 20 Pro inopa yakaenzana chiyero chekuita, mhando yekamera, uye nekugona kwese kushandiswa kweRs 15,500. Zvisinei, chimiro chayo chekumira chaicho ndiko kuchaja kwe65W kwatagara tataura nezvazvo. Iko kusarudzika chete ndiko kuvaka-mhando.
Kusiyana nekuita kwekamera, dhizaini yepanyama, software, kana kugona kwemitambo iyo inogona kana isingafarire kana kukosha kune wese mushandisi, hupenyu hwebhatiri uye kuchaja nekukurumidza chinhu chinotibata isu tese. Ichokwadi chekuti hunyanzvi hwekumusoro-soro hwekuchaja tekinoroji hwave kuwanikwa pamitengo yepakati yepakati ichaita kuti Narzo 20 Pro ive bhenji pachayo pamwe nezvimwe zvigadzirwa zvinoenderera kumberi. Yasara foni yakanaka futi, asi haina kusarudzika. Nekudaro, isu hatingakurudzire chishandiso seyakagadziridzwa iwe yaunofanirwa kuve nayo Nekudaro, kana iwe ukave uchitsvaga foni nyowani kutenderedza iyo Rs 15,000 mucherechedzo, iyo Realme Narzo 20 Pro inopa yakazara package, iyo kunyangwe iine mashoma Cons, yakaoma kurova.
Realme inosimudza wechidiki-centric Narzo akateedzana naNarzo 10 na 10A
Realme Narzo 30 Pro 5G vs Narzo 20 Pro: iyo Narzo nyowani yakasiyana kubva kune yekare?